“NI BOQONNE MALEE HIN BAQANNE. KAN BAQATU DIINA KEENYA MALEE OROMOO MITI. BOQOCHUUN KEENYA AMMOO HANQINOOTA QABNU SIRREEFFACHUUFI TURE, KUNOO SIRREEFAMA GAARIIN JALQABNEE JIRRA” – Beekan Guluma Erena
“NI BOQONNE MALEE HIN BAQANNE. KAN BAQATU DIINA KEENYA MALEE OROMOO MITI. BOQOCHUUN KEENYA AMMOO HANQINOOTA QABNU SIRREEFFACHUUFI TURE, KUNOO SIRREEFAMA GAARIIN JALQABNEE JIRRA”	Beekan Guluma Erena
49SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
“Ni Boqonne malee hin Baqanne. Kan baqatu diina keenya malee Oromoo miti. Boqochuun keenya ammoo hanqinoota qabnu sirreeffachuufi ture, kunoo sirreefama gaariin jalqabnee jirra”
Ummanni Oromoo bifa bittinaawaaniis tahee gurmiin erga mirga ofii deeffachuuf falmii eegale yoo xiqqaate dhaloota lama lakkoofsisuun kun arraan gahee jira. Tahullee, qindoomina bifa ji’oota shanan (5) dabran kana agarsiiseen takkaa sossoohee gabroomfattoota habashaa kanneen hundeen raasuun hollachiisee hin beeku. Inni baranaa kun seenaa haarawa akka biyyattiittiis, akka Afrikaattiis galmeessuun ummata Oromoo yoo boonsu diina keenya ammoo naasuun bobbaaf gala kan wallaalchiseedha.
Akka fedhellee yoo qabsoon bifa mormii maastar pilaanii FFtiin jalqabee, FDGti jijjiiramee, boodarra FXGtiin itti fufaa jiru kun kan duwwaa irraa jalqabe osoo hin taane itti fufa qabsoo bilisummaa Oromoo kan akaakilee fi abboottii keenyaan jalqabamee, gariin ammallee keessaa qooda bahachaa jiraachuun, dhaloota ammaa gahe tahuu namuu nibeena. Mukni jirmi hin margin dameen daraaru hin jiru; nuti arra ammoo sadarkaa daraaraa saniin geenye yoo jennu jirma bilisummaa kan dhiigaa fi lafee wareegamtoota miliyoonotaatiin cimee as gahe kunuunsa xiqqoon akka daraaru godhuun kan hayyoota keenya warreen lubbuun jiran gammachiisuu fi abdachiisuun gufuu gidduu buqqaasee walitti hidhe tahuun dhaloota qubeetiis daran gammachiisee jira.
Akka rakkoo tahee wantoota qabsoo bilisimmaa Oromoo kana qancarsuun umurii gabrummaa ummata keenya gubbatti dheeressan keessaa inni tokkoo fi guddaan tokkummaa barbaadamu dhabuudha.
Tokkummaa dhabuu dhaabilee siyaasa Oromoo irraa ka’uun nutiis waan hedduu jennee hoggantootaa fi miseensota dhaabbilee yeroo adda addaatti qeeqnees arrabsinees, abaarrees, wanta aarii nu baasa jenne dubbannee hojjannee turre; kun ammoo tokkummaa isaaniitiin duurfamuun qabsootti hiriirree bilisoomuu waan barbaanne qofaafi. Akkasumaas diinoni keenya qaawa uumame kanaan fayyadamuun akka dhaloonni haarayni abdiin hin guddanne taadisuuf “Oromoon yoomuu tokko taatee hin qabsooftuu yoo aangoo argattees wal hin bulchitu” nuun jechaa kunoo as geenyee jirra. Jaallan keenyaas tokkoomuun daraaraa FXGtiin argamte kanatti firii gochuuf wa’adaa QBO haaromfachuuf kunoo qophaawaa jiru. Baga gammanne, baga gammaddan!.
An akka yaada kootii sababootni hogganoota keenya addaan baasan jedhee ilaale (1). madda diinagdee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolu yoo tahu, (2). kaayyoo adda addaa qabaataniif osoo hin tahin daandii ykn falaasama ofiitiin deemuun bilisummaa argamsiisuu barbaaduu isaaniiti natti fakkaata. Madda diinagdeetiin walqabatee QBO irra caalatti gargaarsa warra dhihaatiin deegaramaa waan turteef bakka faayidaan isaanii duursa hin argannetti diinagdeen si sakaalu, karoora kee beeku, hamma waraana keetillee beeku, akka waliigalaatti irra caalatti hojii kee too’atu jechuudha. Xinnoo lammii ofii irraa argataniin sochoohanii bu’aa ummanni nama irraa barbaadu fiduun waan ulfaatuuf gaaffiin hedduun hawaasaa fi miseensota keessaa itti burqa, kun lakka deebii dhabuun walitti aaruu fi faca’uun dhufa. Achi booda namuu maqaa walii basuutu itti aana. Kanaaf ragaan guddaan erga Artistoonni Oromoo hangafoonni kannee akka kab. Dr Alii Birraa, Nuhoo Goobanaa, Qamar Yussuf, kkf, warreen duraan konsartii qopheessuu fi sirboota gurguruun qabsoo tinnisaa turan gama biyyaa dhufnaan osoo WBO iddoo basyyee gadi lakkisee kuun biyyatti galuu to kuun ammaas biyyoota alaatti godaanuun qabsoon kufuun carraa keenya taate. Hubadhaa yeroo kanaas dhaaba namumaatu hogganaa jiraa. Warri dhihaa yeroo sigargaaru ammoo irra guddaa waa’adaa siif galu ati osoo kana abdiin karoora sobaa baafattuuti booda jibbamaa taata.
Isa falaasama ofiitiin bilisummaa barbaaduu jedhuus waa malee miti. Mee jalqaba gareelee hundaatuu haa ilaalluu, isaan hundinuu fottoquun dura ABO turan, miseensummaa irraa kaasee hamma hoggansaatti jechuudha. Rakkooniin olitti tuqee fi iccitiiwwan biroo walmakachuun wal dhibdee isaan jiddutti uumamu hiikkachuu dadhabuutu dhufa. Waldhabbiin kun ammoo isaan bira dabreeti namoota dheebuu bilisummaatiif isaan eeggattan giddutillee gufuu uumuun qoodaminsa lagaa fi amantaan akka baqaqan taasisa. Kana booda namuu deegaraa ofii fudhachuun kulkaa baasuuf moggatti baha, si faana jirraa jabaadhuuniis waan beekkamuu miti. Kana booda namuu falaasama ofii irratti cichuun, osoo kaayyoon bu’uuraa tokko tahee jiruu, daandii fi deeggartoota ofii qabatee bilisummaa ummanni danuun kun irraa eeggamu barbaachuuf olii fi gadi fifiiga. Kun ammoo ummata Oromoo beelaa fi dheebuu bilisummaa jaarraa tokkoo olii bahuu barbaadu kanatti danqaa hin buqqaane yoo ta’u diinaaf ammoo carraa itti umurii itti dheerefattan taha.
Amma kun hundinuu seenaa fi sheenaa tahuuf deema. Ummanni keenya hoo akkamiin qabsoo kana cimsuu qaba? Diasporaan silaahiis duruu mudhii itti citee yoo hifadhe jedhees roorroonuu waa hin teessiftuu hamma hafte tanaas ittuma cicitee, zinnaara qaawa dhoorkuun qabsoo galmaan gahuu qabaan dhaamsa kiyya. Qeerroon Oromoo warri biyya jiru hoo? nutiis akkuma dhihoo kana ajaa’iba agarsiifne san daran cimuun qabsoo utubuudha. Kunoo isa duraan hogganaan qabsoo keessanii eenyu? Mee ABOn isin asii dhiichiftaniin? ABOn ofiifuu hedduudhaa isin ammoo kamiin hogganamtu? fi kkf jechuun muraasa keenya shakkii keessatti uumuun qabsoo irraa duubatti deebisaa turaniis amma kunoo tokkummaan uumamuun abdii horachiisee waan jiruuf humni keenyaas dachaa taha amantaa jettuun qaba. Kanaafuu qeerroon qophii xumuruun FXG gara dhumaa ceesisuuf harka walqabannee yeroo kaanu amma.
“Ni Boqonne malee hin Baqanne”.
Injiffannoon yoomuu keenya!!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa49SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Qarri Qeerroo Oromoo Akka Hin Doomneef Dafnee Haa dirmannu!-Boruu Barraaqaa’tiin
KUTANNOON XUMURI – Walaloo abdii namatti horu!! →